विद्यालयमा महिनावारी : खोजौँ अब जिम्मेवारी – Satyapati
विद्यालयमा महिनावारी : खोजौँ अब जिम्मेवारी
विद्यालय जाँदै गरेका कलिला किशोरीहरूलाई हामी पढ्न गइरहेको मात्र देख्छौं । भविष्य चम्काइरहेको मात्र ठान्छौं । तर उनीहरू विद्यालयमा पढ्न मात्र होइन, पीडा भोग्न पनि गइरहेका छन् । विद्यालयको अत्यासलाग्दो भोगाइको विषयमा न उनीहरूले बताए, न हामीले सोध्यौँ । एकदुई जना होइन, देशभरका विद्यालयमा पढ्ने लाखौँ कलिला किशोरीहरूको साझा कथा हो यो ।
११ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक महिनावारी हुँदा म ७ कक्षामा पढ्थेँ । त्यसबेला मलाई महिनावारीबारे केही थाहा थिएन । शारीरिक दुखाइको पीडा त छँदैथियो, त्योभन्दा बढी दुःख दिने अनेक उत्सुकताहरू थिए । तर तिनका जवाफ मसँग थिएनन् । म खूब डराएँ, छट्पटाएँ । त्यसपछिका हरेक महिना आउने आफूभित्रको आँधिबेहेरी एक्लै सामना गर्न वाध्य भएँ । महिनावारीका विषयमा साथीसंगी, आफन्त र शिक्षकहरूसँग खुल्नु ठूलै सकस र लाजको विषय थियो । लाग्थ्यो, त्यो असजिलो पीडाबाट गुज्रिने म मात्रै हुँ । स्कुले जीवनमा महिनावारी हुँदाका अत्यासलाग्दा दिनहरु मैले लाजले लुक्दै, पीडाले छटपटाउँदै र डरले काम्दै कटाएकी छु । महिनावारी सुरु भएपछि १२ कक्षासम्मको छवर्षे स्कुल जीवनमा लगभग ७२ पटक मलाई महिनावारीको पीडाबाट गुज्रिनुपर्यो । मैले भोगेका केही पीडाहरू प्राकृतिक थिए । तर धेरै पीडाको कारक समाज र संस्कार थियो ।
त्यसबेला लाज र सकस बनेको यो विषय अहिले मेरो खोजी र चासो भएको छ । आजका स्कुले बहिनीहरुका उस्तै पीडा खोज्दै म विभिन्न विद्यालयहरुमा पुगेँ । खोज्दै र सोध्दै जाँदा थाहा पाएँ, त्योबेला मैलेजस्तै पीडा भोग्ने बहिनीहरु अहिले पनि धेरै रहेछन् । महिनावारी सरसफाइ र सुरक्षामा काम गरिरहेको संस्था नेपाल प्रजनन् केन्द्रले निकालेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा लगभग २ लाख स्कुले छात्राहरुले विद्यालयमा शौचालयको सुविधा पनि पाएका रहेनछन् । उनीहरूलाई महिनावारीको बेला विद्यालय नै यातना शिविर झैं लागिरहेको रहेछ । मलाई लाग्यो, समस्या समाधानका लागि जिम्मेवारहरुलाई अब मैले नै घच्घच्याउनु पर्छ । स्कुल गइरहेका कलिला किशोरीहरूले प्रत्येक महिना ५-६ दिनसम्म हुने रक्तश्रावको समय कसरी कटाइरहेका छन् त ? थुप्रै स्कुले बहिनीहरूले मलाई बताएकामध्ये केही प्रतिनिधि जवाफ यस्ता थिए ः
१. स्कुलमा स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था हुँदैन ।
२. अत्यधिक रक्तश्राव भएर कक्षा छोड्नुपर्छ ।
३. प्रयोग भएका प्याडहरु फ्याँक्ने ठाउँ हुँदैन ।
४. विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय र पानीको व्यवस्था छैन ।
५. सँगै पढ्ने केटाहरुको भन्दा कमजोर आत्मविश्वास लिएर बस्नुपर्छ ।
६. घरमा हुने छुवाछुतको असरले विद्यालयमा पनि पिरोलिरहन्छ ।
७. शिक्षक र साथीहरूले कुरा नबुझ्दा झन् बढी तनाव हुन्छ ।
८. बेस्सरी पेट दुख्छ, ढाड दुख्छ, पढ्न मन लाग्दैन र निराश लागेर आउँछ ।
९. परीक्षाका बेला महिनावारी हुँदा राम्ररी लेख्न सकिँदैन, नम्बर कम आउँछ, शिक्षक, साथीसंगी र अभिभावकहरूबाट पढाइ खस्काएको दोष खेप्नुपर्छ ।
१०. महिनावारी हुनु प्राकृतिक भए पनि मानिसहरूले बनाएका कृत्रिम संस्कारले हामीलाई दुःख दिएको छ । यसको दोषी घरपरिवार, समाज र विद्यालय प्रशासनसँग चुपचाप भएर ठीकठाक देखिनुुपर्छ ।
यी समस्याहरू झण्डै एक दशकअघि मैले भोगेको भन्दा फरक थिएनन् । यस्ता समस्या समाधानका प्रयासहरू पनि भएका छन् कि भन्ने कौतुहलता जाग्यो । खोज्दै जाँदा भरतपुर, चितवनको नयाँ किरण माविले गरेको प्रयासले मलाई आशाको नयाँ किरण देखायो । यो विद्यालयमा पानी सहितको शौचालय रहेछ । शौचालयमा महिनावारीका बेला प्रयोग भएको स्यानिटरी प्याड फ्याँक्ने प्वाल पनि बनाइएको रहेछ । भित्रबाट फ्याँकिएका प्याडहरू बाहिरपट्टि हावा खेल्ने र घाम पर्नेगरी बनाइएको यो ट्याङ्कीमा जम्मा हुँदारहेछन् । बेलाबेलामा आगो लगाएर प्याडहरू जलाइँदोरहेछ । यो शौचालय बन्नुअघि प्रत्येक दिन महिनावारीको अवस्थामा हुने ३५ देखि ४० छात्रामध्ये आधा जति महिनावारीका बेला विद्यालय नआउने वा आए पनि विदा मागेर घर जाने गर्दा रहेछन् । तर डकर्मी काम समेत जानेका विद्यालयकै शिक्षक भवानीप्रसाद शर्माले खेर गएका ईट्टा र सिमेन्टको उपयोग गरी ५ सय रुपैयाँको लागतमा पुरानै शौचालय बाहिर प्याड ट्याङ्की बनाएछन् ।
भित्तामा प्याड फ्याक्न मिल्नेगरी प्वाल पारेपछि यो शौचालय छात्रामैत्री भएछ । आवश्यक स्यानिटरी प्याडहरुको व्यवस्था विद्यालयमै गरिएछ । त्यसपछि यहाँ पढ्ने कुनै पनि छात्रालाई महिनावारीका बेला विद्यालय छाड्नुपरेनछ । यो शौचालय बनेपछि चितवन जिल्लाभित्रका मात्र होइन, पूर्वी नेपालका कतिपय जिल्लाहरूदेखि सुदूरपश्चिमका कैलाली, अछाम, डोटी र बझाङसम्मका विद्यालयप्रशासक र अभिभावकहरू हेर्न आएका रहेछन् । पुरानै शौचालयमा पाँच–सात हजार रुपैयाँ थपेर पूरा गर्न सकिने यस्तो प्रबिधिका शौचालयहरू अहिले ठाउँठाउँमा बन्दै रहेछन् । महिनावारीको अत्यासलाग्दो असर भोग्न बाध्य बहिनीहरुको पक्षमा राजधानी काठमाण्डौका केही विद्यालयहरू पनि अग्रसर देखिएका रहेछन् । विद्यालयमा अध्ययनरत बहिनीहरुले पनि परिवर्तन महसुस गर्न पाएको बताए । यिनीहरूको कुरा सुनेर म धेरै आशावादी भएको छु । देशभरका सबै स्कुले बहिनीहरुलाई महिनावारीमा पनि विद्यालय जाऊँजाऊँ लाग्ने वातावरण बनाउने काम गर्ने कति ठूलो अवसरले तपाईंहामी सबैलाई पर्खिइरहेको रहेछ !
दुई महिनामा सबै वडामा विजुली बल्छ : मन्त्री पुन
विश्व आन्दोलन हाँक्ने १६ वर्षे किशोरी, ‘युवा शक्तिको प्रतीक’
९० वर्षको उमेरमा अस्ताए कछाड लगाएर खाली खुट्टै सिंहदरबार छिरेका बर्मन बुढा
बाँकेमा एकैदिन हजार स्वाब संकलन हुँदै, बढ्यो औषधिजन्य सामग्रीको अवैध कारोवार
ट्राफिक प्रहरीले थाल्यो कारबाही, हर्न बजाउने चालकलाई ठाउँको ठाउँको जरिवाना
मनकारी वडाध्यक्ष : वर्ष दिनको तलब ज्येष्ठ नागरिकलाई